Olee otú onwe elu Nchekwa nke
Part 1. Gịnị bụ "Documents na Data" na iPhone?
Part 2. Olee otú iji ego nchekwa nke "Documents na Data" na iPhone
Part 3. Olee onwe elu nchekwa nke "Documents na Data" na iPhone
Part 4. 1 Pịa jirichaa gị iPhone si nchekwa
Iji ghọta "Documents na Data", ị ga-akpa ịghọta otú ihe iOS ngwa ọrụ. Onye ọ bụla iOS ngwa na-arụ ọrụ a sandbox gburugburu ebe obibi - nke a pụtara na onye ọ bụla nke ndị a ngwa nwere ya onye nchekwa, nke mere na ọ dịghị mkpa iji weghachite data si ọzọ nke.
The "Documents na Data" nchekwa dere dị iche iche ihe maka ngwa dị iche iche. Ọmụmaatụ; gị Amazon Kindle ngwa nwere eBooks ebudatara maka offline ohere na ya na "Documents na Data" nchekwa. Safari na aka nke ọzọ nwere nchekwa jupụtara mwube ihe nchọgharị gị na caches.
N'ihi na nke a mwepu, gị iPhone ga nwayọọ nwayọọ ghọọ congested na-adịru nwa oge na junk faịlụ nke ga-adịghị anya-alụ ọgụ maka ohere na data gị n'ezie chọrọ na ngwaọrụ gị. Ọ bụghị nanị na ha na-ohere, ma ha ka iPhone iji rụọ ọrụ na a iji nwayọọ ijeụkwụ ruru ya "heft".
Ya mere, ole ohere nchekwa na-eme onye ọ bụla "Documents na Data" nchekwa na-ewe? Ọ na-adabere, n'ezie. Iji chọpụta anwansi nọmba, eso ndị a:
Nzọụkwụ 1. ịnyagharịa Isetịpụ> General> ojiji.
Nzọụkwụ 2. Iji ego ole ohere ọ bụla ngwa si ​​"Documents na Data" na-, pịa na aha nke ngwa. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ebe nchekwa nkesa nke ngwa.
Ebe ọ bụ na onye ọ bụla ngwa-echekwa data na ya onwe nchekwa, e nweghị n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ tufuo nke ndị a na-achọghị data. E nwere ụzọ abụọ ikpochapụ ihe ke "Documents na Data" nchekwa nke iOS ngwa:
Usoro 1. Ihichapụ ma ọ bụ iwepụ ngwa si ​​gị iPhone. Reinstall ngwa.
Usoro 2. Ihichapu ngwa si ​​"Document na Data" faịlụ si n'ime eg emeghe n'akpa uwe si "Mwube" na pịa "Doro Anya faịlụ ebudatara" ka ihichapụ faịlụ ebudatara site na ngwa.
Cheta na: Ọ bụghị ihe niile mobile ngwa na-enyere usoro a si n'ime ngwa.
Ị bụ, ọzọ, nkụda mmụọ nke na ị na-apụghị wụnye ọhụrụ iOS version n'ihi na ị na-enweghị ohere. Ị Ewepụtawo na kwadoo ihe niile dị a ojii nchekwa owuwu. Otú ọ dị, ọ bụ ka ezughị ohere nchekwa.
Olee otú Jiri Wondershare SafeEraser onwe elu Your iPhone
The 1-click mma na a software bụ egwu! Ọ bụ ike hapụ oke ego nke ohere nchekwa na nanị otu laa. Ebe a bụ otú:
Nzọụkwụ 1. On isi interface, họrọ "1-Pịa nzacha na mkpocha" - nke a ga-ịkpalite usoro ihe omume na-amalite ihe nchoputa na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-gosiri ngụkọta ego nke nwa oge na junk faịlụ ozugbo Doppler zuru ezu. Onwe elu na ohere nchekwa na gị iPhone site na ịpị "nzacha na mkpocha" button.
Iji kpamkpam ihichapu niile na-achọghị faịlụ, eme ka n'aka gị iPhone na-ntukwasi-obi jikọọ kọmputa anyị ofụri oge nke usoro.
Nzọụkwụ 3. Mgbe erasing usoro agwụ, na-interface nke software ga chụpụ ihe ọmụma banyere ugbu a nchekwa ala gị na iPhone.
> Resource> Clean-elu> Olee onwe elu Nchekwa nke "Documents na Data" na iPhone